I-Buddhist Teaching on Ksana
Yintoni UbuBuddha Bufundisa Ngexesha?
Sonke siyazi ukuba yeyiphi ixesha. Okanye ngaba thina Funda ezinye iinkcazo zexesha ukusuka kwimiba ye-physics , kwaye unokuzibuza. Ewe, imfundiso yobuBuddha malunga nexesha ingaba yinto enzima, nayo.
Esi sincoko siya kujonga ngexesha ngeendlela ezimbini. Okokuqala yinkcazo yemilinganiselo yexesha kwizibhalo zeBuddhist. Okwesibini yinkcazelo ebalulekileyo yendlela ixesha eliqondwa ngayo kwindlela yokukhanya.
Kukho amagama amabini angamaSanskrit kumilinganiselo yexesha efumaneka kwisibhalo samaBuddha, ksana kunye ne- kalpa .
I- ksana iyunithi elincinci yexesha, malunga neyeshumi elinesixhenxe nesesihlanu yesibini. Ndiyayiqonda le nto inika ixesha elixhatshazwayo nanosecond. Kodwa ngenjongo yokuqonda i-sutras, mhlawumbi akuyimfuneko ukulinganisa i-ksana ngokuchanekileyo.
Ngokwenene, i-ksana yinto encinane engapheliyo, kwaye zonke iintlobo zezinto zenzeka ngaphakathi kwendawo ye-ksana ehluleka ukuqonda. Ngokomzekelo, kuthiwa kukho ama-900 arisings kunye nama-ceasings ngaphakathi ksana nganye. Ndiyakrokra ukuba inani 900 alinakucelwa ukuba lichanile kodwa kunendlela yokuthetha ngokuthi "ininzi."
I- kalpa i-aeon. Kukho amancinci, aphakathi, aphezulu , angenakubalwa ( asamhyeya ) kalpas. Kwimihla eminyaka abaphengululi abahlukahlukeneyo bazame ukulinganisa i-kalpas ngeendlela ezahlukeneyo. Ngokuqhelekileyo, xa i-sutra ikhankanya i-kalpas, ithetha ixesha elide ngokwenene, elide kakhulu.
UBuddha uchaza intaba ephakamileyo kuneNtaba i-Everest.
Kwaminyaka yonke ikhulu leminyaka, umntu usula intaba ngentsimbi encinane. Intaba iya kupheka ngaphambi kokuba i-kalpa iphele, uBuddha uthe.
Ixesha leMathathu kunye neeNyanga zexesha ezintathu
Kanye kunye ne ksanas kunye ne-kalpas, unokuthi ukhankanywe "ngezihlandlo ezintathu" okanye "amaxesha amathathu." Ezi zithetha enye yezinto ezimbini.
Ngamanye amaxesha ithetha nje ngokudlulileyo, okwangoku kunye nekamva. Kodwa ngamanye amaxesha amaxesha amathathu okanye iminyaka emithathu yinto enye ngokupheleleyo.
Ngamanye amaxesha "amaxesha amathathu exesha" ibhekisela kuMhla woMdala, ngoMini ophakathi, kunye noMhla wokugqibela woMthetho (okanye iDharma ). Usuku loMdala liyiminyaka eliwaka leminyaka emva kobomi bukaBuddha apho i-dharma ifundiswa kwaye iqhutywe ngokuchanekileyo. Umhla woMlambo ngowamawaka ezayo (okanye njalo), apho i-dharma iqhutyelwa kwaye iyaqondwa ngokubanzi. Usuku lokugqibela luhlala iminyaka eyi-10 000, kwaye ngeli xesha i-dharma igqithise ngokupheleleyo.
Unokuthi uqaphele ukuba, ukuthetha ngokulandelana kwexesha, ngoku siyiNtsuku yokuLandela. Ngaba oku kubalulekile? Kuyaxhomekeka. Kwezinye izikolo iinyanga ezintathu zithathwa njengento ebalulekileyo kwaye zixutyushwa kakhulu. Kwabanye bahlelwa kakhulu.
Kodwa Yintoni Ixesha, Nangona kunjalo?
Le milinganiselo ingabonakala ingabalulekanga ekugqibeleni indlela iBuddha echaza ngayo ixesha lexesha. Ngokusisiseko, kwiikolo ezininzi zeBuddhism kuyaqondwa ukuba indlela esinayo ngayo ixesha - njengokuba iphuma kwixesha elidlulileyo ukuya kwixesha elizayo - luyinto engafaniyo. Ngaphezulu, kunokuthiwa inkululeko yeNirvana inkululeko kwixesha kunye nendawo.
Ngaphandle koko, iimfundiso malunga nexesha lexesha zivame ukuba kwizinga eliphambili, kwaye kule ngcaciso emfutshane asikwazi ukwenza ngaphezu kokunamathela kwintonga yezwane kumanzi aphantsi.
Ngokomzekelo, eDzogchen - umgangatho ophakathi kwesikolo sase- Nyingma saseBibetan Buddhism - ootitshala bathetha ngokulingana kwexesha. Ezi zidlulileyo, ezikhoyo, ezizayo, kunye nexesha elingenamkhawulo. Ngamanye amaxesha kuboniswa ngokuba "ngamaxesha amathathu kunye nexesha elingenamsebenzi."
Ukungabi ngumfundi weDzogchen Ndiya kuthatha nje ukugwaza kwintoni le mfundiso esithethayo. Iicatshulwa zeDzogchen endandizifundileyo zibonisa ukuba loo nto ayinanto yokuzimela, njengoko zizo zonke iziganeko, kwaye zibonakalisa ngokubangela izizathu kunye neemeko. Eyona nyaniso ( dharmakaya ) ixesha liyabhubha, njengazo zonke ezinye izinto ezahlukileyo.
UKhenpo Tsultrim Gyamtso Rinpoche ungumfundisi ovelele kwisikolo esithile saseTibet, i- Kagyu . Wathi, "Kuze kubekho iikhontrakthi ziphelile, kukho ixesha kwaye wenza amalungiselelo; nangona kunjalo, akufanele uqondisise ngexesha elikhoyo ngokwenene, kwaye kufuneka uqaphele ukuba ngaphakathi kwimeko ebalulekileyo ye-mahamudra, ixesha alikho:" Mahamudra, okanye "uphawu olukhulu," lubhekisela kwimfundiso ephambili kunye nezenzo zikaKagyu.
Ubunjani bexesha kunye nexesha
Umphathi weZen u- Dogen wabhala i-fascicle ye- Shobogenzo ebizwa ngokuthi "Uji," edla ngokuguqulelwa ngokuthi "Ukuba yixesha" okanye "Ixesha loBuntu." Le ngongoma enzima, kodwa ukufundisa okuphambili kuyo kukuba ngokwayo yithuba.
"Isikhathi asihluke kuwe, kwaye njengoko ukhona, ixesha alihambi. Njengokuba ixesha lingabonakaliswa ngokuza nokuhamba, umzuzu okhuphuke ezintabeni lixesha-ngoku ngoku ukuba ixesha liqhubeka liza , lixesha-likhoyo ngoku. "
Wena ulixesha, i-tiger ixesha, i-bamboo lixesha, i-Dogen yabhala. "Ukuba ixesha libhujiswa, iintaba kunye nolwandle ziyabhujiswa. Njengokuba ixesha lingabhubhiswanga, iintaba kunye nolwandle azibhubhiswanga."
Buddhism kunye neMetaphysics
Imfazwe Yehlabathi II: USS Kentucky (BB-66)
IMigangatho kaZwelonke yeGeography
Ukuchaza iFomini yePinehurst (i-aka Pinehurst System)
Funda NgeeSpanish Pronouns Pronouns
Imfazwe Yehlabathi II: I-V-1 Ibhomu yeFlying
Inkcazo kunye neMimiselo ye-Imperialism yeziLwimi
Uludwe lweMigqaliselo yeSpain yaseSpain